बुधबार, श्रावन २१, २०७७
Wed, Aug 5, 2020 at 7:30pm
कोरोनाबाट नेशनल मेडिकल कलेजमा कार्यरत एक पुरुषको मृत्यु #आहा खबर# आज रातीबाट पुन: १५ दिन लकडाउन हुनसक्ने ! #आहा खबर# यामाहा शोरूमका ७ जना स्टाफलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि #आहा खबर# स्रोत नखुलेको १६ लाखसहित एक जना पक्राउ #आहा खबर# एकै दिन १६ सयले बढ्याे सुनकाे मूल्य, प्रतितोला एक लाख नाघ्यो #आहा खबर# यस्ताे बन्याे ८ भाषामा अनुवाद गर्ने स्मार्ट मास्क #आहा खबर# मध्यराति प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच यस्तो कुरा भयाे #आहा खबर# जनकपुरको माटो र चाँदीका इँटा बोकेर राम मन्दिर शिलान्यासका लागि नेपाली टोली अयोध्या प्रस्थान #आहा खबर# लेबनानको बेरुतमा भयानक विष्फोट हुँदा ७० जनाको मृत्यु #आहा खबर# पर्सामा साेमबार मृत्यु भएकी १८ वर्षीया युवतीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि #आहा खबर# आईपीएलले रद्द गर्‍यो चिनियाँ कम्पनी भिभोसँगकाे प्रायोजन सम्झौता #आहा खबर# विश्वमा एकै दिन थपिए २ लाख १९ हजार कोरोना संक्रमित #आहा खबर# बालुवाटारभित्रै लकडाउनबारे मतभेद, के छ सरकारको योजना ? #आहा खबर# लामो प्रतिबन्धपछि भदौ १ गतेदेखि उडान शुरू गर्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तयार #आहा खबर# पाकिस्तानले पनि जारी गर्‍यो जम्मू-कश्मीर र लद्दाखलाई समेटेर नयाँ नक्सा #आहा खबर#
काठमाडौं, २१ साउन । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आज सम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । आज प्रतितोला १६ सयले बढ्दै १ लाख १ हजार ४ सयमा कारोबार भइरहेको छ । यो मूल्य आज सम्मकै उच्च हो । गत हप्ता पनि सुनको मूल्य बढ्ने क्रमले निरन्तरता पायो । आइतबार सुन तोलामा ९६ हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । सोमबार १२ सयले बढेर..
मंगलबार पनि बढेर सुनकाे भाउ पुग्याे १ लाख नजिक
काठमाडाैं, २० साउन । नेपाली बजारमा मंगलबार पनि सुनकाे मूल्य बढेकाे छ । आज सुनको भाउ आज तोलाको ९९ हजार ८ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । आज तोलामा २ सय रुपैयाँ बढेर सुनको भाउ तोलाको ९९ हजार ८ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । हिजो स्थिर रहेको सुनको भाउ आज भने तोलामा दुई सय रुपैयाँ बढेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा..
सुनकाे मूल्यमा नयाँ रेकर्ड कायम, चाँदीकाे पनि बढ्यो
काठमाडौं, १८ साउन । नेपाली बजारमा सुनको मूल्यले आज पनि नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । मूल्य बढ्ने क्रममा आज सुन प्रतितोला ३ सयले बढ्दै ९९ हजार ६ सयमा कारोबार भइरहेको छ । गत हप्ता सुनको मूल्य बढ्ने क्रमले निरन्तरता पायो । आइतबार सुन तोलामा ९६ हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । सोमबार १२ सयले बढेर ९७ हजार ५ सयमा कारोबार..
काठमाडाैं, १८ साउन । नेपाल आयल निगमले इन्धनमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ मूल्य बढाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेको जनाउँदै निगमले यहाँ पनि पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर २/२ रुपैयाँ बढाउने निर्णय गरेको हो । भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले अगस्ट १ मा पठाएको मूल्यसूचीअनुसार इन्धनको मूल्य समायोजन गरिएको निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले जानकारी दिए । ‘कच्चा तेलको मूल्य, डलरको विनियम..
काठमाडौं, १६ साउन । शुक्रबार पनि नेपाली बजरमा सुनकाे मूल्य बढेकाे छ । आज सुनकाे मूल्य प्रतिताेला ३ सय रूपैयाँले बढेर ९९ हजार ३ सय पुगेकाे हाे । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहीबार तोलामा ९९ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुन शुक्रबार ३०० रुपैयाँ बढेर ९९ हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भएको हो । यस्तै तेजावी सुन तोलामा ९८ हजार ८६५ रुपैयाँमा कारोबार भएको..
गण्डकी। साउन १५ गतेदेखि पर्यटकीय क्षेत्र खुल्ने सरकारको निर्णयसँगै चार महिनायता बन्द भएका पोखराका होटेल आजदेखि खुलेका छन्। होटल खुले पनि आन्तरिक तथा बाह्य उडान नखुलेका अवस्थामा पर्यटकको आवागमनका लागि भने समय कुर्नुपर्ने देखिएको व्यवसायी बताउँछन्। लामो समयदेखि बन्द भएका होटेल सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्थापनलगायत कामलाई व्यवसायीले अघि बढाएको पश्चिमाञ्चल होटेल सङ्घका अध्यक्ष विकल तुलाचनले जानकारी दिए। अघिपछि पनि वर्षातको..
काठमाडौं, १५ साउन । लकडाउनले बन्द भएका होटल तथा रेष्टुरेन्ट चार महिनापछि आजदेखि सञ्चालनमा आउँदै छन् । सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर होटल तथा रेष्टुरेण्ट सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेपछि आजदेखि सञ्चालनमा आउन लागेका हुन् । होटल सञ्चालनमा आए पनि कोरोना भाइरसको महामारी कायमै रहकाले विदेशी एवं आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल नहुँदासम्म ब्यापार हुने सम्भावना नरहेको व्यवसायीहरूले जनाएका छन् । बिहीबारदेखि होटल तथा रेस्टुरेन्ट..
काठमाडौं। नेपालमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण दिनप्रतिदिन बढ्दै छ। अहिलेसम्म १८ हजारभन्दा बढी व्यक्ति सङ्क्रमित भएका छन् भने पाँच हजारभन्दा बढी अझै पनि उपचाररत छन्। तेह्र हजारभन्दा बढी व्यक्ति निको भएर घर फर्किसकेका छन्। तर सङ्क्रमणको जोखिमका कारण गत चैत ११ देखि शुरु गरिएको बन्दाबन्दी भने विस्तारै खुल्दैछ। लामो समयपछि सरकारले यही साउन ५ गतेबाट लामो दुरीका यातायात, हवाईसेवा र शिक्षण..
सोमबार, श्रावन १२, २०७७ साल
काठमाडौं। बन्दाबन्दीपछिको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन पर्यटनका अन्य क्षेत्र जस्तै होटल क्षेत्रले पनि स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डलाई पालना गर्दै सञ्चालनको तयारी तीव्र पारेको छ। बन्दाबन्दीको करिब चार महिना व्यवसाय प्रायः ठप्प भएको होटल व्यवसायलाई गतिशील तुल्याउन स्वास्थ्य सजकता र आवश्यक जनशक्ति परिचालन गरेर व्यवसाय शुरु गर्न लागिएको हो। सरकारले यही साउन १५ देखि होटल व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेपछि व्यवसायीले अहिले पर्यटकस्तरीय..
काठमाडौं, १२ साउन । नेपाली बजारमा चिनीको मूल्य बढेको छ । अहिले बजारमा तरकारी लगायत बिभिन्न सामानको मूल्य बढी रहेको बेला चिनीको मूल्य पनि बढेको हो । मुलुकभित्र चिनीको मौज्दात सकिँदै गएपछि ठूला व्यापारीले चिनीको मूल्य बढाएका हुन् । बजारमा किलोको ८५ रुपैयामा बिक्रि हुँदै आएको चिनीको मूल्य अहिले किलोकै १ सय रुपैयासम्म पुगेको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग चिनीको मौज्दात सकिएपछि..
काठमाडौं, १२ साउन । साेमबार पनि सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । मूल्य बढ्ने क्रममा आइतबार सुन तोलामा ९६ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । सोमबार १२ सयले बढेर ९७ हजार ५ सयमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला ९७ हजार ६० कायम भएको छ । यस्तै आज चाँदीको मूल्य पनि..
काठमाडाैं, ११ साउन । आइतबार पनि सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । मूल्य बढ्ने क्रममा आज सुन तोलामा ९६ हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । यस्तै आइतबार तेजावी सुनको मूल्य ९५ हजार ८६० रुपैयाँ कायम भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार कारोबारको अन्तिम दिन शुक्रबारको तुलनामा सुनको मूल्य आज तोलामा रु ५०० बढेको हो । महासंघले शुक्रबार सुनको..
काठमाडौं, ११ साउन। वर्षा र बाढीको बहाना बनाएर बिचौलियाले हरियो तरकारीको मूल्य सात दिनमै दोब्बर बढाएका छन् । किसानबाट प्रतिकिलो १५–२० रुपैयाँमा किनिएको तरकारी बिचौलियाले ६० देखि ७० रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएका छन् । बिचौलियाले बर्सेनि वर्षा र बाढीको बहानामा हरियो तरकारीको मूल्य दोब्बर बढाएर उपभोक्तालाई ठग्दै आएका छन् । केन्द्र सरकार र स्थानीय तहबाट बजार अनुगमन नहुँदा बिचौलियाले बर्सेनि बाढीपहिरोको बहानामा..
काठमाडाैं, ९ साउन । निरन्तर बढेकाे सुनकाे मूल्य ुक्रबार पनि बढेकाे छ । शुक्रबार सुनकाे मूल्य ताेलामा १३ सय रूपैयाँले बढेर हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेकाे छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार क्रबार सुनको मूल्य प्रतितोला ९५ हजार ८ सयमा पुगेर हालसम्मकै उच्च रेकर्ड राखेको हे। बिहीबार ९४ हजार ५ सयमा कारोबार भएको सुन एकैदिन १३ सयले बढकाे हाे । आज चाँदीको मूल्य..
काठमाडाैं, ९ साउन। एक हजार रुपियाँको नोटमा अब नेपालकै जुम्ल्याहा हात्तीको तस्बिर देख्न पाइने भएको छ । हालसम्म एक हजारको नोटमा देश बाहिरको हात्तीको तस्बिर रहँदै आएकोमा राम–लक्ष्मण नामका स्वदेशी जुम्ल्याहा हात्तीले त्यसलाई विस्थापित गर्नेछन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बुधबारबाट राम–लक्ष्मणको वयस्क तस्बिरसहित हजारको नयाँ नोट सार्वजनिक गरेपछि यो अवस्था आएको हो । बैङ्कका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले स्वदेशकै हात्तीको तस्बिर राख्नुपर्छ भन्ने..
काठमाडौं, ८ साउन । नेपाली बजारमा सुनको भाउले बिहीबार पनि रेकर्ड ब्रेक गरेको छ । बिहीबार सुनको भाउ प्रतितोला ५ सय रुपैयाँले बढेको हो । नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार छापावाल सुनको भाउ आज तोलाको ९४ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम भएको छ । यसैगरी, तेजावी सुनको भाउ तोलाको ९४ हजार ६५ रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । यो अहिलेसम्मकै सर्वाधिक बढी मूल्य हो..
काठमाडाैं, ७ साउन । बुधबार नेपाली बजारमा सुन मुल्यले रकेर्ड तोडेको छ । आज सुनको मुल्य तोलामा १३०० रुपैयाँले बढेर हालसम्म नयाँ विन्दुमा पुगेको हाे । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघकाअनुसार आजका लागि सुनको मुल्य प्रतितोला ९४ हजार पुगेको छ, जुन हालसम्म कै उच्च हो । यस अघि सुनको उच्च विन्दु प्रतितोला ९२ हजार ७०० रुपैयाँ रहेको थियो । यस्तै, आजका लागि तेजावी सुनको..
काठमाडाैँ , ७ साउन। अब भदाै सात गते भित्र कर तिरिसक्नु पर्ने भएकाे छ । सर्बाेच्चकाे आदेशअनुसार लकडाउन खुलेकाे ३० दिनभित्र कर बुझाउन मिल्ने गरी यस्ताे उर्दी जारी भएकाे हाे । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा मंगलबार मध्यरातदेखि लकडाउन पूर्णरुपमा अन्त्यगर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए सँगै अब व्यवसायीले कर तिर्ने समय भदाै सातसम्म ताेकिएकाे हाे । यसअघि सरकारले..
काठमाडौं, ६ साउन । मंगलबार नेपाली बजारमा सुनकाे मूल्य बढेकाे छ । आज सुनको मूल्य प्रतितोला ४ सय रुपैयाँले बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएकाे छ । महासंघका अनुसार आज छापावाला सुन ९२ हजार ७०० मा कारोबार भइरहेको छ भने तेजावी सुन प्रतिताेला ९२ हजार २६० रुपैंयाँमा कारोबार भइरहेको छ । यस्तै चाँदी पनि आज प्रतितोला ४० रुपैंयाँ बढेको छ । आज चाँदी प्रतिताेला १ हजार..
काठमाडाैं, ५ साउन । नेपाली बजारमा साेमबार सुनकाे मूल्यमा गिरावट आएकाे छ । आज सुनकाे मूल्य प्रतिताेला २ सय रूपैयाँले घटेकाे हाे । आइतबार तोलामा ९२ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य सोमवार घटेर तोलामा ९२ हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार सोमवार तेजावी सुन तोलामा ९१ हजार ८६५ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । यसैगरी..
काठमाडौं , २ साउन। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को मौद्रिक नीति आज शुक्रबार (साउन २ गते) सार्वजनिक गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंक बोर्ड बैठकले शुक्रबार बिहान मौद्रिक नीति पारित गर्नेछ । आजै दिउँसो सम्भवत: ३ बजे सार्वजनिक गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ । गभर्नर भएपछि महाप्रसाद अधिकारीले ल्याउन लागेको यो पहिलो मौद्रिक नीति हो । कारोना भाइरसका कारण..
काठमाडाैं, १ साउन । नेपाली बजारमा सुनको भाउ बिहिबार तोलामा एक सय रुपैयाँले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुन आज तोलाको ९२ हजार ७ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । बुधबार तोलामा ६ सय रुपैयाँ बढेको सुनको भाउ अहिलेसम्मकै उच्च तोलामा ९२ हजार ८ सय रुपैयाँ कायम भएको थियो । आज चाँदीको भाउ स्थिर रहेको छ । चाँदी बिहिबार..
Results 1706: You are at page 1 of 57